“Al-Shabaab, Soomaaliya iyo Jabuuti baa nala dagaallamaya” Maamulka Canfarta | Berberanews.com
Home WARARKA “Al-Shabaab, Soomaaliya iyo Jabuuti baa nala dagaallamaya” Maamulka Canfarta
“Al-Shabaab, Soomaaliya iyo Jabuuti baa nala dagaallamaya” Maamulka Canfarta
Dagaalka xooggiisa ayaa la sheegay in uu shalay ka socdo deegaanka Garba-Ciise, halkaas oo laga soo sheegayo khasaare aan la cayimin.
“Haddaan annagu dagaalka soo qaadno gar ayayba inoo ahaan lahayd, sababtoo ah dhulkeennii oo dhan ayay heystaan, dadkeennii ayay barakiciyeen, dad ayay ku gowraceen Garba Ciise. Hadda cidda soo qaadday waa la ogyahay, dowladda dhexena waa ogtahay,” ayuu yidhi.
“Annagu diyaar ayaan u nahay, balse iyadoo ay dhanka kale heystaan dhulkeennii, iskuulladeennii iyo masaajiddadeennii, haddii nala dhoho nabad qaata, taasi waxay noqoneysaa nabad aan nabad ahayn,” Ayuu yidhi Maxamed Rooble.
dagaalka canfarta iyo Somalida
Previous article“Dowladdu waa inay ka war haysaa waxa dalka soo gelaya” Sheekh Berberawi
Next articleWaxgaradka Afrika oo ku baaqay tallaabo ka dhan ah Itoobiya